Kulamo siyaasadeed oo ka socda Dhuusamareeb iyo amaanka oo aad loo adkeeyay – Hornafrik Media Network
Midowga Musharaxiinta oo war cusub ka soo saaray isku dhacyadii Muqdisho
Muqdisho: Hakad ku yimid duullimaadka qaar ka mid shirkadaha caalamiga ah
Xog: Shaxda isbaheysiga qarsoon ee bixiyey amarka weerarkii murashaxiinta
Ciidanka xoogga dalka oo Al-Shabaab kala wareegay deegaano ka tirsan SH/Dhexe
Kulamo siyaasadeed oo ka socda Dhuusamareeb iyo amaanka oo aad loo adkeeyay
By Liibaan Nuur	 On Feb 1, 2020
Ammaanka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa saacadihii lasoo dhaafay aad loo adkeeyey, waxaana lagu arkayaa ciidamo xaafadaha kala duwan ee magaalada ku baaraya dadka iyo gaadiidka.
Magaalada sidoo kale waxaa ka socda kulamo siyaasadeed, kuwaas oo xal loogu raadinayo khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dhismaha maamulka Galmudug.
Kulamadan oo ah kuwo dhinacyo badan leh ayaa waxay u dhaxeeyaan guddoonka baarlamaanlka Galmudug iyo musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka, gaar ahaan kuwa diidan ka qeyb galka doorashada ay garwadeenka ka tahay dowladda federaalka.
Dhinaca kale hoggaanka Ahlu-Sunna oo dhawaan madaxweyne u doortay Sheekh Maxamed Shaakir ayaa iyaguna ku kulansan xarunta Inji, waxayna ka arinsanayaan caqabadaha uu wajahayo maamulkii ay dhawaan uga dhawaaqeen magaalada Dhuusamareeb.
Shalay ayaa magaalada waxaa ka dhacay banaanbax nabadeed oo lagu taageerayey Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo garabka Ahlu-sunna ay madaxweyne u doorteen.
Xaaladda siyaasadeed ee Galmudug ayaa cakiran waxaana socda diyaar garowga doorashada ay garwadeenka ka tahay dowladda dhexe oo loo balansanyahay in Axadda burrito ay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb.
Lama oga sida ay ku suurtaabi karto qabashada doorashadaas, waxaa weli diidan inay is diiwaan geliyaan musharaxiin badan oo muhiim u ah ka qeyb galka doorashada Galmudug. Kuwaas oo saluugsan nadaamka ay doorashadu ku socoto.
Xubno ka tirsan Baarlamaanka labaad ee maamulkaas ayaa noo sheegay sheegay in goor dhaw ay yeelanayaan kulan looga arinsanayo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ee loo asteeyey inay berri ka dhacdo Dhuusamareeb.
Sidoo kale xubno ka socda beesha caalamka ayaa lagu wadaa inay gelinka dambe ee maanta gaaraan magaalada Dhuusamareeb, kuwaas oo u kuur geli doona dhinacyada siyaasadeed ee isku haya doorashada maamulka Galmudug.
Ingiriiska oo si rasmi ah uga baxay Midowga Yurub
Qaramada Midoobay oo eedeyn u jeedisay dalalka isku haya Liibiya